Hagaaji Shaashadda Moobilka Dillaacsan: Tallaabooyinka Lagu Dayactiro laguna Dayactiro Shaashadda | Androidsis
Waxa ugu horeeya ee maskaxda lagu hayo marka aad raadineyso wado dayactir shaashaddaada moobaylka, ayaa ah inaadan raacin tillaabooyinka khiyaanooyinka aan joojinaynin ku wareegida internetka. Si kasta oo ay ku qancaan ay umuuqdaan, waa waxyaabo been abuur ah, waxaana jira YouTubers badan oo tijaabiyey oo beeniyey 90% khiyaanooyinkaas.
Markaa haddii si kadis ah aad ula kulanto fiidiyoow ay kuugu sheegayaan in daawada yar ee cadayga aad ku dayactiri karto shaashaddaada moobiilka, ha u biimeynin. In ka badan wax kasta maxaa yeelay waxay u badan tahay inaad dhammeyn doonto jabinta, waana hubaal in lagaa tagi doono adiga oo aan terminaalkaaga lahayn. Sidaa darteed, Waxaan kuu sharaxeynaa waxa aad sameyn laheyd hadii aad isku aragto xaaladan, maadaama ay jiraan dhowr talaabo oo ah inaad raacdo ka hor intaadan u qaadan mobilkaaga dayactirka. Sababtoo ah haa, taasi waa ikhtiyaarka kaliya ee dhabta ah ee la isku halleyn karo ee aad haysato.
1 Waxa la sameeyo ka hor inta aan dib loo hagaajin shaashadda moobiilkaaga
1.1 Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso ka hor inta aan dib loo hagaajin shaashadda moobiilkaaga
1.2 Tallaabada xigta ee la raacayo: dib u deji
2 Xagee loo qaadaa moobilkaaga si loogu hagaajiyo
Waxa la sameeyo ka hor inta aan dib loo hagaajin shaashadda moobiilkaaga
Waad sameyn kartaa aad u taxaddar oo aad leedahay daboolka ugu fiican, Waxaa habboon in qalad ah in taleefankaaga uu ku soo dhaco dhulka ama uu ku dhaco wax ka tagaya shaashaddiisa oo dhaawacan. Laakiin shaki la'aan kan ugu weyn ee wadno xanuunku waa kan aan ku dhibtoonno markuu ku soo dhaco wejiga dhulka, oo waxaan si tartiib tartiib ah kor ugu qaadnay anigoo u duceynaya dhammaan ilaahyada aan ognahay inaysan waxba ku dhicin.
Laakiin had iyo jeer ma shaqeyso, waxaanan helnaa shil dhab ah, ama nasasho aan aad u culusayn oo kuu oggolaanaysa inaad sii wadato isticmaalka terminaalkaaga. Laakiin tani way ka sii dari kartaa, markaa si aad u dayactirto shaashadda mobilkaaga, waa inaad u tagtaa shirkadda dayactirka xaaladaha. Laakiin sidaan soo sheegnay, kahor intaadan uxirin dayactirka waxaa jira talaabooyin dhowr ah oo ay tahay inaad raacdo, waxaanna kuugu sharxeynaa hoosta.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso ka hor inta aan dib loo hagaajin shaashadda moobiilkaaga
Haddii aad nasiib u leedahay in taleefankaagu wali shaqeynayo, Kahor intaadan shaashadda dayactirin, waxaa jira wax ay tahay inaad sameyso. Waxaan ula jeednaa waa inaad ilaaliso xogtaada si qofka qalabkaaga hagaajinaya uusan u heli karin asturnaantaada. Tanna, waa inaad nuqul ka sameysaa xogta ka dibna ka tirtirtaa boosteejadaada.
Si aad u awooddo nuqul xogta ka soo qaado moobaylkaaga, waxa ugu fiican ee aad sameyn karto waa inaad dib u soo celiso aaladda oo dhan. Marka la eego codsiyada aad soo dejisay, mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay nidaam keyd u gaar ah, marka waa inaad mid walba gashaa oo aad hubisaa inaad dhaqaajineyso haddii aysan ahayn. Tani waxay muhiimad gaar ah u leedahay barnaamijyada farriimaha, sida Telegram, WhatsApp iyo wixii la mid ah. Dabcan, ha ilaawin inaad kaydiso dhammaan dadka aad la xiriirto.
Haddii, dhinaca kale, shaashadda taleefankaaga gacanta uu istaagay shaqadii nasashada darteed, ha walwelin, dhammaantood ma lumin. Waa inaad ku xirtaa kombuyuutarkaaga si aad marin ugu hesho dhammaan xogtaada. Haddii aad leedahay terminal-ka Android, waxaad awoodi doontaa inaad gasho sawirrada iyo kuwa kale. Xaaladda haysashada qalabka macruufka, wax walba si fiican ayaa loo waafajiyaa, markaa wax dhibaato ah ma la kulmi doontid. Hadana hadaad xidid leedahay, waxaad awoodi doontaa inaad adeegsato codsiyo dhinac saddexaad ah, sida Soogalootiga iyo Titanium Backup, in kasta oo ay tani tahay wax ay ahayd inaad hore u sii rakibto.
Tallaabada xigta ee la raacayo: dib u deji
Waxaa jirta sabab aan kuu faray inaad sameyso keyd wax kasta oo aad haysato ka hor intaadan u kicin dayactirka shaashaddaada moobiilka, waana taas inaad u baahan tahay inaad dib u dejiso. Mar labaad, haddii aad nasiib leedahay in kasta oo shaashadda la jebiyey ay weli shaqeyso, Waxaan kuu daynay talaabooyinka aad raacayso si aad dib ugu dajiso goobaha warshada, taas oo meesha ka saaraysa wax walba si ay ugu muuqato inay sanduuqa ka soo baxday.
Haddii terminaalkaagu yahay Android, waa inaad tagtaa goobaha oo aad ka soo gasho qaybta nidaamka. Markaan halkan, muuji xulashooyinka horumarsan si aad u gasho Ikhtiyaarrada Soo-kabashada. Halkan waxaad ku arki doontaa ikhtiyaarka oranaya ku noqo gobolka waxsoosaarka. Haddii ay dhacdo in lakabka qaabeynta ee soo-saaraha uusan ku tusin ikhtiyaarkan halkan, waxaad isticmaali kartaa mashiinka raadinta si aad u hesho.
Haddii ay dhacdo inaad haysato iPhone, tag goobaha oo tag qaybta Guud. Halkan, ku dhowaad dhammaadka xulashooyinka, waxaad arki doontaa Dib-u-dejin, oo waxaad dooran kartaa inaad masaxdo dhammaan waxyaabaha iyo dejimaha si ay ugu sii ahaato sidii mid cusub oo ka baxsan sanduuqa.
Haddii nasiib daro shaashadda moobaylkaagu aanu shaqeynaynin, haysashada mobilada gacanta ee 'Android' waa inaad sameysaa dib u dejin adag. Telefoonka dami oo shid adigoo riixaya badhanka korontada iyo badhanka mugga isla waqtigaas. Sidan ayaad ku gali doontaa xulashooyinka gudaha ee Android, halkaasna waxaad ka dejineysaa xulashooyinka ay tahay inaad ku doorato badhanka dabka iyo mugga, oo kiiskan uu yahay Masax xogta iyo keydka.
Mar labaad, marka laga hadlayo haysashada iphone-ka shaashadiisu shaqeyn weydo, nidaamka wuxuu ku xirnaan doonaa nidaamka hawlgalka. Iyada oo la adeegsanayo macOS Catalina iyo goor dambe ayaad awoodi doontaa inaad ka raadiso mobiilkaaga Finder. In kasta oo qoraalkii hore iyo Windows-ka aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo iTunes. Laga soo bilaabo halkan waxaad awoodi doontaa inaad doorato iPhone-kaaga iyo xulashooyinka soo muuqan doona waxaad arki doontaa badhanka Soo-celinta iPhone, markaa uma baahnid inaad taabatid terminal-kaaga.
Xagee loo qaadaa moobilkaaga si loogu hagaajiyo
Habka ugu ammaansan ee dayactirka shaashadda moobiilka waa inaad u qaadatid ama ugu diraan adeeg farsamo oo xirfadle ah. Halkaas waxay ku leeyihiin dayactirayaal ku takhasusay astaanta terminalkaaga, sidaa darteed natiijooyinka wanaagsan waa la xaqiijiyay. Dhibaatada adeeggeedu waa inay badanaa leedahay qiimo aad u sarreeya marka loo eego kuwa kale, laakiin dabcan, qaybaha dayactirka ayaa asal ahaan ahaan doona.
Waxa kale oo aad adigu gacanta ku haysaa dukaamada dayactirka aan rasmiga ahaynWaa wax aad caadi u ah in la helo ugu yaraan mid ka mid ah kuwaas oo ku takhasusay hagaajinta taleefannada, iyo guud ahaan qiimahoodu aad bay uga jaban yihiin. Iyada oo ay taasi jirto, waxay kuxirantahay in la isticmaalo qaybo asal ah ama tayo fiican leh, natiijo wanaagsan ama ka xun ee dayactirka ayaa la gaari doonaa. Mana aha wax la mid ah in dukaanka xaafadda la aado marka loo tago BeMovil ama Taleefanka Guriga.
Taladayada ugu fiican ayaa ah, haddii qalabkaagu cusub yahay oo qaali yahay, aad dukaanka dayactirka rasmiga ah. Taasina waa haddii aad maalgashi fiican ku sameysay aaladdaada, waxay u badan tahay inaad doorbideyso inaad hubiso in dayactirkeeda lagu kalsoon yahay. Haddii boosteejadaadu ay dhawr sano jirsato oo aadan dan ka lahayn inay natiijadeedu tahay tan ugu fiican, waxaad aadi kartaa dukaanka qeybta saddexaad oo wax badan oo badan ayaad keydin kartaa.
Haddii ay dhacdo in terminal-kaaga uu leeyahay caymis, waad uga faa'iideysan kartaa inaad ku hagaajiso shaashadda moobiilka si bilaash ah. Ugu dambeyntiina iyo haddii aad ku dhiirrato maxaa yeelay waxaad tahay qof xirfad leh, waxaa jira bogag sida iFixit ah oo ay ku sharxayaan sida aad u sameyn lahayd, marka lagu daro maadada aad u baahan doonto. Laakiin haddii aad si dhow u eegto, kharashku wuu ka badan yahay, markaa way ka wanaagsan tahay inaad u qaadatid goob xirfadle ah si loogu hagaajiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sida loo dayactiro shaashadda taleefankaaga
5-ta barnaamij ee qarsoodiga ah ee ugu fiican Android